Ngwaọrụ Eletrọniki Ike nke Soft Starter
Onye ọ bụla n'ime gị thyristors yiri ejikọrọ reversely nke isii thyristors ma ọ bụ atọ MTX thyristor ike modul ka ide a atọ-adọ voltaji regulator, na jikọọ ya n'etiti ike ọkọnọ na moto stator.
Dị ka ọmụmaatụ nke atọ-n'ụzọ zuru ezu na-achịkwa akwa rectifier circuit, mgbe eji a adụ Starter na-amalite moto, na mmepụta voltaji nke thyristor nwayọọ nwayọọ na-abawanye, na moto nke nta nke nta accelerates ruo mgbe thyristor na-eduzi. The moto na-arụ ọrụ na n'ibu e ji mara nke gosiri voltaji iji nweta ezigbo mmalite, belata amalite ugbu a, na-ezere amalite na nke ugbu a njem. Mgbe moto rutere ọsọ ọsọ, usoro mmalite amalite, na onye dị nro na-akpaghị aka dochie thyristor site na iji kọntaktị gafere iji nye voltaji egosiri maka arụmọrụ nke moto iji belata ọkụ ọkụ nke thyristor ma gbatịa ọrụ nke onye dị nro, melite ịrụ ọrụ nke ọma ma zere harmonic mmetọ na ntanetị ike.
Onye na-ebido ihe dị nro nwekwara ike inye ọrụ nkwụsị nkwụsị nke na-abụghị usoro mmalite dị nro. Voltaji nwayọ na-ebelata ọsọ na-eji nwayọ nwayọ na-agbada n ’efu iji zere iyi egwu nke ike nkwụsị na-akpata. Mgbe ị na-eji mmalite dị nro, mmalite mmalite bụ n'ozuzu 2 ~ 3 nke akara akara ugbu a, ọnụego mgbanwe ngbanwe ikuku na-adịkarị n'ime 10%, yana mmetụta na akụrụngwa ndị ọzọ pere mpe.
Na mmezi kwa ụbọchị, attentionaa ntị iji lelee ọnọdụ gburugburu ebe obibi nke mmalite dị nro ugboro ugboro. Lezienụ anya iji chọpụta ma enwere ihe ndị dị na nro mmalite dị nro nke na-egbochi ya ikuku na ikpochapu ọkụ, ma hụ na enwere ohere zuru oke gburugburu Starter dị nro (karịa 150mm), na-elele mgbe niile ma akara nkesa nkesa adịghị, na-ehicha ájá iji zere imetụta mgbasa ọkụ ma gbochie thyristor ka ọ ghara imebi n'ihi oke ịrị elu okpomọkụ. N'otu oge ahụ, ọ nwere ike izere nchapu mmiri na ihe ọghọm dị mkpirikpi nke ájá kpatara.
The thyristor rụrụ ọrụ dị ka AC voltaji ụkpụrụ na adụ Starter. Iji ngwa ntinye dị ala (voltage ntinye: 380V), ntụgharị na-agagharị na-agbanwe agbanwe ugboro ugboro (VDRM, VNKP) na-atụ aro ka ịhọrọ 1200V. Iji ọkara voltaji ngwa (ntinye ntinye: 660V), ntụgharị na-agagharị na-agbanwe agbanwe (VDRM, VNKP) na-atụ aro ka ịhọrọ 2200V ma ọ bụ n'elu. Iji ngwa eletrik dị elu (voltage input ≥1100V), ntụgharị na-aga n'ihu ma weghachite ugboro ugboro egosipụtara (VDRM, VNKP) na-atụ aro ka ịhọrọ 3500V ma ọ bụ n'elu. Iji 6KV ma ọ bụ 10KV adụ Starter, akwa voltaji mkpa thyristors ịbụ yiri ejikọrọ reversely ahụ usoro jikọọ. 6KV adụ Starter mkpa 6 thyristors (2 thyristors yiri ejikọrọ reversely 3 ìgwè). 10KV adụ Starter mkpa 10 thyristors (2 thyristors yiri ejikọrọ reversely 5 ìgwè). Dị otú ahụ na-eguzogide voltaji na onye ọ bụla thyristor ga-2000V na-atụ / laa azu un-ugboro ugboro gosiri voltaji - VDSM na VRSM nke thyristor ahọpụtara kwesịrị ịbụ ihe karịrị 6500V.
Runau Eletrọniki bụ ọkachamara n'inye thyristor na modul ike maka mmalite dị nro ọkachasị na nnukwu ugbu a (karịa 3000A) yana akwa voltage (karịa 6000V). Reliabledị a pụrụ ịdabere na ya na ikike siri ike na-enyere obere ego aka ịghọta oke arụmọrụ. The ala conductive voltaji dobe, ike n'elu-ugbu a ike, elu mmetụta na voltaji na-eguzogide, niile n'elu kwuru banyere Njirimara nke Runau thyristor afọ ojuju na eluigwe na ala chọrọ nke adụ Starter keukwu ngwa n'ụzọ zuru okè.
Thyristor Nhọrọ Nwere ike ikwu Rịmaatụ
(KW / Na: 380V)
Soft Starter Ji Thyristor (VDRM / VNKP)
Motor Rated Ugbu A I (A)
Soft Starter Ji Thyristor mTAV (A)
Volta dị ala